All kuwa xanuunsato ma dhiman!
Hadda, 11.373 xanuunsan virus Corona ah. Ee ah kuwa, 259 dhintay, laakiin 252 ayaa ka soo kabsaday!
virus Corona Jönköping
Yesterday aan ogaaday in Sweden ayaa helay ay dhacdo marka hore la xaqiijiyay of coronavirus ah, naag jir 20 sano ah waxaa go'doonsan ee isbitaalka ee gobolka ee Ryhov Jönköping . Labada video live waxaan ka Bixin on virus Corona. Waxyaabaha kale, sababta ay noo cabsi la coronavirus?
Early on, waxaan u maleeyey inay ahayd mid aad u cabsi iyo ballaadhisay. Dhammaan ka dhigaya virus Corona uusan dhiman. Kuwa ku dhintay ayaa dadka multi-xanuunsan, sida qaar badan oo ka mid ah ifilada doofaarka dhintay dhawr sano ka hor. Hadda oo coronavirus waa in horumarka bilaabo hargabka caadiga ah xilliyeed , taasoo keeni karta in boqolaal dhimasho Swedish . Haddii nixiyo aan u kicin dadka iyo sida sare.
252 ayaa ka soo kabsaday
Naagtii ayaa 20-sano jirka ah ee Jönköping waa yar yahay, malaha xoog leh, oo aan u dhimanayaan. Waxay ugu dhakhsaha badan sidaas bogsan doonaan.
Hadda, 11.373 xanuunsan virus Corona ah . Ee ah kuwa, 259 dhintay , laakiin 252 ayaa ka soo kabsaday !
Waxaan Ilaahay rumeeyey Ciise dayn maayo nafteena la kulmay ee ka Cabsada oo ka cabsi coronavirus ka buuxsantay. Our badbaadada Ciise Masiix, wax kasta oo dhaca.
Ilaah waa idin badbaadin doonaa cudurkii
Yesterday yeedhay Rune awoowe ii. By sabab ah corona ah, ayuu ii siiyey Kitaab weyn:
Sabuurka 91: 5-tii Waxaad ma cabsan doono naxdinta habeennimada, War sow fallaadhii in duqsigu by maalin, 6 ma aha cudurkii gudcurka ku socota ama cudurku hirarkii hadhkii.
Maxay tahay sababta aan ma cabsan Mu'min ah oo Ciise? In Aayaadka hore, waxaad ka heli jawaabta:
SABUURRADII 91: 1 Kan dega Ilaaha ugu sarreeya joog ka bacdi hooska Qaadirka ah, 2, wuxuu leeyahay: ". Rabbigu waa magangalkayga iyo qalcaddayda, Ilaahayow, waxaan isku halleeyaa" 3 Oo isagu waa inuu kaa dabinka ugaadhsadaha, Iyo belaayada ku burburin samatabbixiyo . 4 Iyada oo baadad ayuu idinku dabooli doonaa, oo aad baalashiisa hoostooda magan doonaa. Runtiisa waxay tahay gaashaan iyo gabbaad.
Haddii aadan helin Ciise Masiix iyo badbaadi helay si aan runtii ku talin in aad sidaas sameyso. Waxaad heli kartaa Ciise by tukanayay salaada this soo jeediyey qaylo ah si toos ah Ciise:
"Ciise, ayaan hadda aad hesho iyo in aad qirtaan sida Rabbigu. Waxaan rumaysanahay in Ilaah aad sara kiciyey kuwii dhintay. Waad ku mahadsan tahay in aan hadda soo badbaadiyey. Waad ku mahadsan tahay in aad iigu dambi dhaafay iyo aad ugu mahad naqayaa inaanan hadda ahay ilmo Ilaah. Aamiin. "
Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 17:26